နိုင်ငံခြားက မင်းသားတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဇနီးကို ချစ်စဖွယ်လေး တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဇဏ်ခီ ........ » MPA
နိုင်ငံခြားက မင်းသားတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဇနီးကို ချစ်စဖွယ်လေး တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဇဏ်ခီ ……..
ခီ​မောင်​နှံဆိုပြီး ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ကြတဲ့ ဇဏ်​ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ဇနီး​မောင်​နှံနှစ်​ဦးက​တော့ ချစ်​ရတဲ့အနုပညာအလုပ်​​တွေကို အတူတကွဖန်​တီးရင်း ပြီးပြည့်​စုံတဲ့ မိသားစုဘဝ​လေးကိုလည်း ပုံ​ဖော်​​နေကြတာပါ။
အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးကြတာချင်းတူတဲ့ ဒါရိုက်​တာနဲ့ မင်းသားတို့ရဲ့ အိမ်​​ထောင်​​ရေးက​တော့ ရာခိုင်​နှုန်းအပြည့်​ နားလည်​မှု​တွေနဲ့ ​အ​ကောင်းဆုံး အနုပညာ​တွေကို ပရိသတ်​​တွေကို ချပြဖို့ ကြိုးစား​နေတာပါ။
လတ်​တ​လောမှာ​တော့ ခရစ္စတီးနားခီက ခင်ပွန်းမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံခြားသားမင်းသားတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တယ်လို့ စနောက်ပြီးပြောလိုက်တာကြောင့် ဇဏ်ခီတစ်ယောက် ဇနီးသည်ကို ချစ်စဖွယ်လေး ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သူမဟုတ်ပဲ တစ်ခြားမင်းသားနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဇနီးသည်ကို ချစ်စရာကောင်းအောင် တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဇဏ်ခီရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နေ်ာ။
ခရစ္စတီးနားခီကတော့ “မင်းသားဆို ကိုဇဏ်ခီအပြင် တခြားမရိုက်ဘူးလားမေးကြတယ်နော်..ရိုက်ချင်တာပေါ့လို့..အပေါ်ဆုံးတန်းက 38 လေး ၂ယောက်ထဲက တယောက်လောက် နဲ့ရိုက်ရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ!!!
အိမ်က 38 လေး ဒီပို့စ်ကို မမြင်ပါစေနဲ့ကွယ်…😛😛😛(ဓါတ်ပုံဆရာများနဲ့ original post တင်သူကို credit ပေးပါတယ်)” ဆိုပြီး သူမသဘောကျတဲ့ နိုင်ငံခြားက မင်းသားကြီးနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီး ခင်ပွန်းကိုစရင်း ပြောထားတာပါ။
ခရစ္စတီးနားခီရဲ့ပိုစ့်အောက်မှာတော့ ဇဏ်ခီက “သူနဲ့ တစ်ကားလောက်စီစဉ်ပေးရင် ကိုယ်လည်း စီစဉ်ပေးမယ်” ဆိုပြီး ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး စကားလက်ဂျိုဟန်ဆန်နဲ့ သူ့ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ပေးရင် ပြန်စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုပြီး စစနောက်နောက်နဲ့ ပြန်ပြောခဲ့တာပါ။
ဇဏ်​ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ဇနီး​မောင်​နှံနှစ်​ဦးက​တော့ စစ်​မှန်​တဲ့အနုပညာအတွက်​ အချိန်​ယူပြီး အ​ကောင်းဆုံးလုပ်​ကိုင်​​နေကြတာပါ။
သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတဲ့ “မုဒြာခေါ်သံ” ရုပ်ရှင်နဲ့ “ဥပါယ်တံမျဉ်” ရုပ်ရှင်တွေကလည်း ပရိသတ်တွေတော်တော်လေး နှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်​ပရိသတ်​​တွေလည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စစနောက်နောက်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ခီ​မောင်​နှံကိုချစ်ရင်​ Share သွားကြဖို့မ​မေ့ပါနဲ့​နော်​။
ခီမောငျနှံဆိုပွီး ပရိသတျတှကေ ခဈြစနိုးနဲ့ ချေါကွတဲ့ ဇဏျခီနဲ့ ခရစ်စတီးနားခီတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးကတော့ ခဈြရတဲ့အနုပညာအလုပျတှကေို အတူတကှဖနျတီးရငျး ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကိုလညျး ပုံဖျောနကွေတာပါ။
အနုပညာကို ခဈြမွတျနိုးကွတာခငျြးတူတဲ့ ဒါရိုကျတာနဲ့ မငျးသားတို့ရဲ့ အိမျထောငျရေးကတော့ ရာခိုငျနှုနျးအပွညျ့ နားလညျမှုတှနေဲ့ အကောငျးဆုံး အနုပညာတှကေို ပရိသတျတှကေို ခပြွဖို့ ကွိုးစားနတောပါ။
လတျတလောမှာတော့ ခရစ်စတီးနားခီက ခငျပှနျးမဟုတျပဲ နိုငျငံခွားသားမငျးသားတှနေဲ့ ရုပျရှငျရိုကျခငျြတယျလို့ စနောကျပွီးပွောလိုကျတာကွောငျ့ ဇဏျခီတဈယောကျ ဇနီးသညျကို ခဈြစဖှယျလေး ပွနျလညျတုံ့ပွနျလိုကျတာ တှရေ့ပါတယျ။
ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ သူမဟုတျပဲ တဈခွားမငျးသားနဲ့ ရုပျရှငျရိုကျခငျြတယျဆိုတဲ့ ဇနီးသညျကို ခဈြစရာကောငျးအောငျ တုံ့ပွနျလိုကျတဲ့ ဇဏျခီရဲ့အကွောငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ခရစ်စတီးနားခီကတော့ “မငျးသားဆို ကိုဇဏျခီအပွငျ တခွားမရိုကျဘူးလားမေးကွတယျနျော..ရိုကျခငျြတာပေါ့လို့..အပျေါဆုံးတနျးက 38 လေး ၂ယောကျထဲက တယောကျလောကျ နဲ့ရိုကျရရငျဘယျလောကျကောငျးမလဲ!!!
အိမျက 38 လေး ဒီပို့ဈကို မမွငျပါစနေဲ့ကှယျ…😛😛😛(ဓါတျပုံဆရာမြားနဲ့ original post တငျသူကို credit ပေးပါတယျ)” ဆိုပွီး သူမသဘောကတြဲ့ နိုငျငံခွားက မငျးသားကွီးနဲ့ ရုပျရှငျရိုကျခငျြတယျဆိုပွီး ခငျပှနျးကိုစရငျး ပွောထားတာပါ။
ခရစ်စတီးနားခီရဲ့ပိုဈ့အောကျမှာတော့ ဇဏျခီက “သူနဲ့ တဈကားလောကျစီစဉျပေးရငျ ကိုယျလညျး စီစဉျပေးမယျ” ဆိုပွီး ဟောလိဝုဒျမငျးသမီး စကားလကျဂြိုဟနျဆနျနဲ့ သူ့ကို ရုပျရှငျရိုကျပေးရငျ ပွနျစီစဉျပေးမယျဆိုပွီး စစနောကျနောကျနဲ့ ပွနျပွောခဲ့တာပါ။
ဇဏျခီနဲ့ ခရစ်စတီးနားခီတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးကတော့ စဈမှနျတဲ့အနုပညာအတှကျ အခြိနျယူပွီး အကောငျးဆုံးလုပျကိုငျနကွေတာပါ။
သူတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦး အကောငျးဆုံးကွိုးစားထားတဲ့ “မုဒွာချေါသံ” ရုပျရှငျနဲ့ “ဥပါယျတံမဉျြ” ရုပျရှငျတှကေလညျး ပရိသတျတှတေျောတျောလေး နှဈခွိုကျခဲ့ကွတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ခဈြပရိသတျတှလေညျး တဈဦးနဲ့တဈဦး စစနောကျနောကျနဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှတဲ့ ခီမောငျနှံကိုခဈြရငျ Share သှားကွဖို့မမပေ့ါနဲ့နျော။